ပြည်နယ်ပါတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
August 11, 2017 USDP 2016
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ လစဉ် ပြုလုပ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို သြဂုတ်လ ၉ ရက် နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ပြည်နယ်ပါတီရုံးအစည်း အဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစန်းရွှေ(ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်)၊ ပြည်နယ်ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဝေ(ဗဟို ကော်မတီဝင်)နှင့် ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီဝင် များ ခရိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌများနှင့် မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမှ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားရမည့် ပါတီလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ပြည်နယ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူးမှ ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်မှ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အစည်းအဝေးခေါ်ယူရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကဏ္ဍအသီးသီးကို တာဝန်ယူထားကြသည့် ပြည်နယ် ပါတီကော်မတီဝင်များမှ မိမိတို့တာဝန်ယူထားရသည့် ကဏ္ဍရပ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ လိုအပ်ချက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ကြသည်။ ထို့နောက် မြို့နယ်ပါတီများမှ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများ၊ လိုအပ် ချက်များအား အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြကာ အစည်းအဝေးအား ညနေ ၆း၁၅ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
← မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရပ်/ကျေး အဆင့် နှုတ်မှု စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
မောင်တောဒေသ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပေးရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ ANP ခေါင်းဆောင်များတောင်းဆို →
ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.Hideo Watanabe နှင့်အဖွဲ့အား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံ
January 29, 2019 USDP 2016 Comments Off on ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.Hideo Watanabe နှင့်အဖွဲ့အား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ခရိုင်/ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များ ရပ်/ကျေးအုပ်စုမှ အမာခံများနှင့် တွေ့ဆုံ
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးခင်ရီနှင့်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေး
June 13, 2018 USDP 2016 Comments Off on ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးခင်ရီနှင့်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေး